စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ - Ministry of Education
၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ စင်ကာပူနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း စင်ကာပူနိုင်ငံအစိုးရနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ တို့အကြား စင်ကာပူ-မြန်မာ နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များ ဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ နည်းပညာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်သည် အဓိကဦးစားပေးနယ်ပယ် (၃) ရပ် ဖြစ်သည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုနှင့် ပြည်သူ့စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်များအတွင်း စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၂။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ သမ္မတ H.E. Mr. Tony Tan Keng Yam မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အတွင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ စင်ကာပူ-မြန်မာ အသက်မွေးပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေး ကျောင်း ပူးတွဲတည်ထောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အသက်မွေးပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကျောင်းသည် ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေး၊ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ အဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စက်မှုအတတ်ပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု စသည့် အသက်မွေးပညာရပ်နယ်ပယ် (၄) ခုဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူ-မြန်မာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် သင်ကြားရေးကျောင်း တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
၃။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နေပြည်တော်၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Chua Hian Kong Robert တို့သည် စင်ကာပူ-မြန်မာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကျောင်း တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာအား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များ
၄။ စင်ကာပူနိုင်ငံဘက်မှ စင်ကာပူ-မြန်မာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးကျောင်း တည်ဆောက်မည့်နေရာတွင် ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် စင်ကာပူဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦး၊ မြန်မာဘက်မှ ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦးပါဝင်သော Board of Institute (BOI) ဖွဲ့စည်း ထားပါသည်။ အဆောက်အဦး ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်အပြိုင် ဆရာ၊ ဆရာမများအား ရွေးချယ်၍ သင်တန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်သွား ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
၅။ ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ခုနှစ် စင်ကာပူပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ဖြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တို့မှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား (၄) ဦးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ အစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ပေးသည့် ဘွဲ့ကြိုပညာသင်ဆုများ ရရှိခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ Nanyang Technological University(NTU) နှင့် National University of Singapore(NUS) တို့တွင် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း၌ (၂) ဦး တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက် ရှိပါသည်။
Total Hits : 1141556802